प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी, कसले मार्ला बाजी ? - Ganatantra Online
प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी, कसले मार्ला बाजी ?
गणतन्त्र अनलाइन ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रवार
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको पत्रसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको लागि दावी गरेका छन् ।
दावी पत्रमा जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो र एमालेका अध्यक्ष एवम् दलका नेता केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शीलतनिवासमा छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्ष र माधव नेपाल समूहले संयुक्तरुपमा संसदको बहुमत पुर्‍याई सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने भएका छन्।
चार पक्षका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित उनीहरु अहिले राष्ट्रपति कार्यालय गएका हुन्। देउवासँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरु शीतल निवास पुगेका छन्।
चारपक्षीय छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार उनीहरुले कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न लागेका हुन्। संसदमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेपाल समूहका २७ र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षका गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुटेको हो।
विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुर्‍याएर नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि एमाले नेता नेपाल पक्षका २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। ‘हामीले २८ जनाको हस्ताक्षर गरेर नेता नेपाललाई बुझायौं, वहाँ त्यो लिएर चारपक्षीय छलफलमा जानुभयो,’ नेपाल पक्षका हस्ताक्षरकर्ता एक सांसदले भने।